Milateriga waddanka Koonfur Afrika oo wax ka badel ku sameeyay siyaasaddooda ku aaddan dumarka Muslimiinta ee ka tirsan milateriga dalkaas. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Milateriga waddanka Koonfur Afrika oo wax ka badel ku sameeyay siyaasaddooda ku...
Milateriga waddanka Koonfur Afrika oo wax ka badel ku sameeyay siyaasaddooda ku aaddan dumarka Muslimiinta ee ka tirsan milateriga dalkaas.
Haweenka muslimiinta ee ku jira milateriga Koonfur Afrika ayaa loo oggolaaday inay xirtaan xijaabka, iyagoona la xiran kara dareyska ciidmaada.
Arrinkan oo ay horay u diidday wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas ayaa waxaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay dedaal arrintaas ku aadan waday Fatuma Issaaq, oo ah haweeney katirsan ciidanka wadankaas.
Waxaa ay mudadaas dalbaneysay in xuquuqda diimeed ee ay leedahay loo oggolaado iyo in ay waajibaadkeeda gudato. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii meesha laga saaray dembi loo heystay Fatuma oo ahaa in iyadoo xiran dareyska ciidanka ay xiratay xijaabka.
Waxaa ay mar wajahday in shaqada laga eryo kadib markii lagu eedeeyay “amar diiddo ay ku sameysay taliyaheeda” kaddib markii uu amar ku siiyay inay iska siibto xijaabka.
Gaashaanle Fatuma Issaq oo katirsan milateriga, gaar ahaan qeybta caafimaadka ayaa wargeyska The Cape Times u sheegtay in go’aanka la xiriira xijaabka uusan guul u ahayn oo keliya iyada balse uu sidookale guul u yahay dhammaan dhibanayaashii u aamusnaa diintooda.
“Waxaan ku nool nahay dal dimquraadi ah oo micnaheedu tahay in aysan jirin wax takoor ah oo la xiriira dhanka diinta uu qofka aaminsan yahay, waxaan aaminsanahay in diinta ay tahay aasaaska ama qiyamka dal walba”, ayay u sheegtay wargeyska.
Waxaa kale oo ay u mahad-celisay hey’ad ka shaqeysay arrimaha sharciga, taas oo gacan ka siisay in loo oggolaado inay xirato xijaabka inta ay shaqada ku guda jirto.
Kaddib markii meesha laga saaray eedeyntii loo heystay oo ahayd inay amar diido sameysay ayaa waxaa lagu heshiiyay in gaashaanle Fatuma iyo kuwa lamidka ah ay xiran karaan xijaabka, maadaama taas aysan waxba ka baddaleyn dareyska ciidamada.
Hey’adda LRC ayaa kiiskan maxkamadda cadaaladda u gudbisay, waxaana doodda haweeneydan ay markii hore maxkamadda sinnaanta ee dalkaas u sheegtay in hab-labiska ciidamada dalka Koonfur Afrika ay tahay mid sharci darro ah, haseyeeshee waxaa meesha ka dhalatay dood kale oo ah in wax laga baddelo siyaasadda hab-labiska, si haweenka Muslimiinta ah ee kamidka ah ciidamada loogu oggolaado inay xijaabka la xiran karaan dareyska ciidamada.
Hey’addan ayaa sidookale sheegtay in aysan sii wadi doonin gal dacwadeedka ka dhanka wasaaradda difaaca ee dalka koonfur Afrika, maadaama siyaasaddooda xilligan aanay ahayn mid kala sooceysa ciidamada, gaar ahaan Muslimiinta kamidka ah milateriga.
Previous articleBanaanbax lagu taageerayo go’aanka uu madaxweynaha uu ku ansixiyay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho mataalada Aqalka Sare oo loo xiray Wadooyinka..
Next articleTaliyaha booliska gobolka waqooyi bari Kenya oo faahfaahin ka bixiyay qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan Kenya
axmed shiikh - February 21, 2021 0
Qaramada Midoobay oo walaac ka muujisay iska hor imaadyadii Muqdisho ka...